Department of Medical Service – စာမျက်နှာ2– Ministry of Health and Sports
ဆေးလူမှုဆက်ဆံရေးဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းလမ်းညွှန် မူကြမ်းအပါ် ကြည့်ရှုသုံးသပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း (Workshop on Review and Revision of SOP and Guideline for Medical Social Workers) ပထမအကြိမ် (၂)ရက်တာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအား အစည်းအဝေးခန်းမ၊ ခုတင်-၅၀၀ အထူးကုဆေးရုံကြီး၊ …
၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၄ ရက်နေ့၊နေ့လည် (၁:၀၀)နာရီတွင် ကုသရေးဦးစီးဌာန အစည်း အဝေးခန်းမ၌ ကုသရေးရေးဦးစီးဌာန၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ်(စီမံ/ဘဏ္ဍာ)၊ ကုသရေးဦးစီးဌာနအောက်ရှိဌာနခွဲများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးများနှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသည့်တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံကိန်း)မှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား အသေးစိတ်ရှင်းလင်း …
ကျန်းမာ‌ရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ Online training on SARI Treatment for Medical Officers in the COVID-19 frontline ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မေလ (၂၉)ရက်နေ့မှ စတင်၍ …
မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံများနှင့် တိုက်နယ်ဆေးရုံများတွင် ဆောင်ရွက်မည့် အခြေခံကျ သည့် မရှိမဖြစ် ကုသရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Standard Operating Procedure (SOP) နှင့် Guidelines များ တည်းဖြတ်ရေးအဖွဲ့ တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ (၂၅)ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁:၀၀)နာရီအချိန်တွင် …
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ ဦးဆောင်၍ Video Conferencing on Hospital Infection Prevention and Control ကို ၂၀၂၀-ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့၊ နေ့လယ် …
———— အထက်ပါ အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ရေနောက်ရခြင်းကိစ္စမှာ ၁။ ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေသည့် ခရိုင်ဆေးရုံကြီးနှင့်အညီ ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးကိုသာ ရှေ့ထားပြီး သန့်ရှင်းမှုကို အစဉ်အလေးထားလျက်ရှိကြောင်း ပထမဦးစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။ ၂။ ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းပြလိုသည်မှာ အခင်းဖြစ်ပွားစဉ်နေ့က ဆေးရုံတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်စဉ် ရေပိုက်ကျိုးပေါက်သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ …
General principles ▪ Hemodialysis patients are immunocompromised and highly susceptible populations. Hemodialysis centers areahigh-risk area in terms of COVID-19. ▪ …
မြန်မာနိုင်ငံ COVID-19အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေး စီမံချက် (P173902) နှင့် ထပ်ဆောင်းရန်ပုံငွေ စီမံချက် (P174386)
Download Pdf; https://drive.google.com/file/d/1EgqlaOToU2DcoHkML8yw-vWxPv8nBB5B/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1EcfXrh-d073x0RKEMMvvJtkoHi9TGECA/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1t9VByAzKSBC4hJBHVJv89Xen6Idu6ID0/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1zpGsiDO8HMyblBrXcpLltdWXy7hIC5pG/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1JkG8vTs1wa4XPDoApSD4X1pPvwTi5bHU/view?usp=sharing
Discharge Criteria for COVID-19 Patients (as of 7-9-2020)
Download pdf; https://drive.google.com/file/d/1kLzVZrK2ZBJWYOorf4TzzftMBdN6vNOb/view?usp=sharing
Clinical Management Guidelines for COVID-19 Acute Respiratory Disease. Version-08/2020 Date-(25-8-2020)
Download Pdf; https://drive.google.com/file/d/1dvQOUGpGE1ZDsO38n9_G_tSBUzKFcPfC/view?usp=sharing
စက်ပစ္စည်း(Anesthesia Group)ဝယ်ယူရန် တင်ဒါအောင်စာရင်း
အောက်ပါ Link တွင် ကြည့်ရှုပါ။ https://drive.google.com/open?id=1rfsL7bLCjuTrZwhfb35-ZOC47dORLNQ5
Blood Bank Tender Result
ရန်ကုန်အထူးကုဆေးရုံသစ်ကြီးအတွက် Tender result
COVID 19 အတွက် အရေးပေါ် ဝယ်ယူမည့် Tender Result